राष्ट्रपतिको भित्ते फोटोमा गरियो के? ‘ब्लर’ गरेकोदेखि ‘सेतो पट्टीले छोपेको’सम्मका समाचार – MySansar
राष्ट्रपतिको भित्ते फोटोमा गरियो के? ‘ब्लर’ गरेकोदेखि ‘सेतो पट्टीले छोपेको’सम्मका समाचार
Posted on July 15, 2021 July 17, 2021 by Salokya
संविधानको धारा नखोली प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको कारण हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चर्चामा रहेकी थिइन्। चर्चा आज झन् चर्को छ। आज चाहिँ राष्ट्रपतिको भित्ते फोटोका कारण तरङ्ग मच्चिएको हो।
सोसल मिडियाका अरु प्रयोगकर्ताहरुको त कुरै छाडिदिउँ, पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितदेखि लिएर नाम चलेका/नचलेका अनलाइन मिडियाहरुसम्म यही फोटोका पछाडि लागेका थिए। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको भित्तोमा देखिएको राष्ट्रपतिको फोटोमा ‘ब्लर गरेको’ देखि सेतोपट्टीले छोपेकोसम्मका समाचार अनलाइन मिडियामा देखिए। यो बारे यसो आफूलाई लाग्या कुरो लेख्दैछु।
सबभन्दा पहिला यो समाचार मैले जनतासमाचारटाइम्समा देखेको थिएँ जसको शीर्षक छ- राष्ट्रपतिबिरुद्ध प्रधानमन्त्रीको निकृष्ट हर्कत : कार्यालयको फोटोमा ब्लर गरियो, यी हुन प्रमाण जनतासमाचारटाइम्समा ओलीको समर्थनमा समाचार आउने गर्छ। यसअघि यही अनलाइनमा प्रचण्ड–माधवले नेतृत्व गरेको जुलसमै भारतको झण्डा शीर्षकमा फोटोलाई तोडमरोड गरी सम्पादन गरेर भारतीय झण्डा राखिएको बारे हामीले गत फेब्रुअरीमा फ्याक्ट चेक गरेका थियौँ। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्।
समाचार पहिलो र दोस्रो प्याराग्राफ यस्तो छ-
सर्वाेच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भई काम सम्हालेलगत्तै शेरबहादुर देउवाले आपत्तिजनक काम गर्नुभएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको फोटो नै ब्लर गरेको तथ्य सरकारी सञ्चार माध्यम राससले बाहिर ल्याएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको कक्षमा राखिएको राष्ट्रपति भण्डारीको तस्विरमा यसरी ब्लर गरिएको हो । यो तस्विर राससले बाहिर ल्याएको छ । फोटोग्राफर रोशन सापकोटाले लिएको यी तस्वीरमा हेर्नाेस, राष्ट्रपतिबिरुद्ध देउवा सरकारले कतिसम्मको निकृष्ट हर्कत गरेको रहेछ ।
त्यसपछि यी फोटोहरु राखिएका छन्-
अब यो समाचार पढेर लप्पनछप्पन केही नजानेको सोझो हिसाबले के भएको होला भनी कल्पना गरौँ-
संविधानको धारा नै नतोकी नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति र धारा नतोकी शपथ खान्न भन्ने प्रधानमन्त्रीबीच विवाद भएर शपथ लिने कार्यक्रमै ढिला हुन पुगेको थियो। कान्तिपुरको समाचार अनुसार शपथपछि प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति हिँडेकी थिइन्।
देउवालाई असाध्यै रिस उठ्यो। पदबहालीका लागि सिंहदरबार पुग्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला कुर्सीमा कुल्चेर (फोटो निकै माथि राखिएको छ नि त-यत्तिकै त भेट्दैन त्यत्रो माथि) राष्ट्रपतिको फोटो निकाले, फ्रेमबाट फोटो निकाले अनि त्यसलाई ‘ब्लर’ गरेर फेरि त्यहीँ झुण्ड्याए।
अब अलि लजिक लगाएर सोचौँ-
ह्या, आफैले कुर्सीमा टेकेर त निकालेनन् होला राष्ट्रपतिको फोटो। तर के गर्नु, समाचारमा ‘प्रधानमन्त्री देउवाले नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको फोटो ब्लर गरेको’ लेखिएको छ।
लजिक लगाएर फेरि सोचौँ- प्रधानमन्त्रीले गरेको हैन, गर्न लगाएको होला।
त्यसो भए फेरि एक पटक के भएको होला भनी कल्पना गरौँ-
प्रम देउवालाई खुबै रिस उठिरहेको थियो। शितलनिवासबाट बाहिरिने बित्तिकै मुख्य सचिवलाई फोन गरेर भने, ‘ए बैरागीजी, त्यो म अहिले जाने अफिसमा राष्ट्रपतिको फोटो छ? त्यो निकालेर ब्लर बनाएर राख्नु त!’ (प्रधानमन्त्रीले अरु कम ओहोदाका कर्मचारीलाई त के भने होलान् र, कि कसो?)
बैरागीले कोही कर्मचारीलाई लगाए। कर्मचारीले पनि हातैले भ्याउने होइन, टेबल वा कुर्सी कतैबाट ल्याएर त्यसमा टेकेर राष्ट्रपतिको फोटो निकाले, फ्रेमबाट फोटो निकाले अनि त्यसलाई ‘ब्लर’ गरेर फेरि त्यहीँ झुण्ड्याए।
अब कल्पनाबाट यथार्थको धरातलमा अवतरण गर्नुस् र अलि लजिक लगाएर सोच्नुस्- ब्लर भनेको के ?
ब्लर भनेको धमिलो बनाउनु हो। फोटोमा ब्लर खासगरी फोटो एडिटिङ गर्ने सफ्टवेयर (जस्तो कि फोटोसप) बाट गरिन्छ।
फेरि कल्पना गरौँ- प्रम देउवाले भनेपछि कर्मचारीले राष्ट्रपतिको पुरानो फोटो राखिएको ठाउँमा निकाले, फ्रेमबाट पुरानो फोटो झिके, भर्खरै कलर प्रिन्टरबाट फोटोसपबाट ब्लर गरिएको राष्ट्रपतिको नयाँ फोटो प्रिन्ट गरिएको थियो, त्यो फ्रेममा राखे, अनि फेरि त्यही ठाउँमा झुण्ड्याइदिए।
जनताटाइम्सकै फोटो राखेर पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले फेसबुकमा लेखे-‘नयाँ सरकारको पहिलो काम फोटोमा गणतन्त्रको मजाक’
‘ब्लर’बाट ‘सेतो पट्टी’
त्यसपछि अर्को अनलाइन नेपालप्रेसले पनि यो बारे समाचार लेख्यो। नेपालप्रेससम्म आइपुग्दा फोटो ‘ब्लर’बाट ‘सेतो पट्टी’मा पुग्यो। शीर्षक छ- ‘राष्ट्रपतिको तस्वीरमा ‘सेतो पट्टी’! के हो वास्तविकता ?’
शीर्षकमा ‘के हो वास्तविकता’ भन्दै प्रश्न गरिएको छ तर समाचारमा त्यसको जवाफ भने छैन, आशंकामा लगेर समाचार टुङ्ग्याइएको छ।
समाचारमा लेखिएको छ- ‘राष्ट्रपति भण्डारीको तस्वीर नियालेर हेर्दा उनको आँखा सेतो कागज वा टेपले छोपिएको जस्तो देखिएको छ।’
दुई वटा सम्भावना :
‘छोपिएको’ होइन, ‘छोपिएको जस्तो देखिएको’ रे। समाचारमा त्यही लेखिएको छ।
समाचारमा लेखिएको छ- ‘कतिपयले यसलाई फोटोसप गरिएको भनेका छन् त कतिले राष्ट्रपतिसँगको रिसइबीका कारण सरकारले नै यस्तो हर्कत गरेको आशंका गरेका छन्।’
फोटो अरुले होइन, सरकारी मिडिया राससले राखेको हो। एक जमानामा एउटा राष्ट्रिय दैनिकले नेताको पछाडि देखिने ऋषि धमलाको फोटो ब्लर गरेर फोटो छापेको कुरा त पत्रकारहरुमाझ रमाइलो किस्सा कै रुपमा रहेको छ। तर राति हुँदो राससका कसैले काम नपाएर किन फोटो बिगार्न फोटोसप गरे होला र। गरेर के फाइदा? रमाइलो त के भने नेपालप्रेसले राससका महाप्रबन्धकको कोटसमेत लिएका छन्, जसमा उनले फोटोसप नगरेको भनेका छन्।
फोटो खिच्ने राससका पत्रकार रोशन सापकोटाले चाहिँ समाचारमा भनेका छन्- ‘नेपाल टेलिभिजनको लाइट प्रधानमन्त्रीको आँखामा सोझै परेपछि सिलिङतिर फर्काइएको थियो । त्यही लाइटका कारण राष्ट्रपतिको फोटोमा त्यस्तो देखिएको हो ।’’
योहो टेलिभिजनको न्युजपोर्टल योहोखबरमा पनि ‘राष्ट्रपतिको तस्बिरमा सेतोपट्टीले किन छोपियो?’ शीर्षकमा एउटा समाचार रहेछ। तर यसमा भएका सबै वाक्य नेपालप्रेसबाटै हुबहु कपिपेस्ट रहेछ। राससका महाप्रबन्धक र फोटोग्राफरको कोटसमेत जस्ताको तस्तै राखिएको रहेछ। हेर्नुस् समाचार।
अरु थुप्रै अनलाइनहरुमा पनि आएको छ सेतो पट्टीवाला समाचार। एउटा थप उदाहरण मात्र
अब फेरि एकचोटी कल्पनामा जाउँ।
यी समाचारहरुले प्रधानमन्त्री देउवाले नै गरेको भनेका छैनन्, त्यसैले गर्न लगाएको रुपमा कल्पना गरौँ।
धारा नखोलेर गरेको नियुक्तिको कुरामा किचकिच परेकोले प्रम देउवालाई खुबै रिस उठिरहेको थियो। त्यही रिसइबीका कारण (समाचारमा त्यही लेखिएको छ) शितलनिवासबाट बाहिरिने बित्तिकै मुख्य सचिवलाई भने, ‘ए बैरागीजी, त्यो म अहिले जाने अफिसमा राष्ट्रपतिको फोटो छ? त्यो फोटोको आँखा छोप्दिनु त!’ (प्रधानमन्त्रीले अरु कम ओहोदाका कर्मचारीलाई त के भने होलान् र, कि कसो?)
बैरागीले कोही कर्मचारीलाई लगाए। कर्मचारीले पनि हातैले भ्याउने होइन, टेबल वा कुर्सी कतैबाट ल्याएर त्यसमा टेकेर राष्ट्रपतिको फोटो निकाले, भूइँमा राखे, फ्रेमबाट फोटो निकाले अनि कतैबाट ल्याएको सेतो कपडाले आँखामा पट्टी बाँधिदिए। अनि फेरि फ्रेममा फोटो राखेर त्यही भित्तामा झुण्ड्याइदिए।
यो भयो सेतो पट्टीको कल्पना।
अब समाचारमै लेखिए जस्तो गरी अलि संशोधित कल्पना गरौँ-
माथिल्लो लाइन त संशोधन गर्न परेन त्यही भएर कपिपेस्ट : धारा नखोलेर गरेको नियुक्तिको कुरामा किचकिच परेकोले प्रम देउवालाई खुबै रिस उठिरहेको थियो। त्यही रिसइबीका कारण (समाचारमा त्यही लेखिएको छ) शितलनिवासबाट बाहिरिने बित्तिकै मुख्य सचिवलाई भने, ‘ए बैरागीजी, त्यो म अहिले जाने अफिसमा राष्ट्रपतिको फोटो छ? त्यो फोटोको आँखा छोप्दिनु त!’
बैरागीले कोही कर्मचारीलाई लगाए। कर्मचारीले पनि हातैले भ्याउने होइन, टेबल वा कुर्सी कतैबाट ल्याएर त्यसमा टेकेर राष्ट्रपतिको फोटो निकाले, भूइँमा राखे, फ्रेमबाट फोटो निकाले अनि सेतो टेपले आँखा छोपिदिए। अनि फेरि फ्रेममा फोटो राखेर त्यही भित्तामा झुण्ड्याइदिए।
यो फ्रेमबाट फोटो निकाल्ने प्रक्रिया चाहिँ किन अपनाउनु परेको भने नेपालप्रेसले राखेको फोटोमा कालो फ्रेममा होइन, भित्रको फोटोमा मात्र सेतो टेप वा पट्टी देखिएको छ। त्यो गर्नलाई त फ्रेम खोलेर भित्रको फोटोमा नै चल्नु पर्‍यो नि होइन र- लजिक लगाउनुस् !
कल्पनाबाट फेरि यथार्थको धरातलमा उत्रनुस् र लजिक लगाउनुस्- प्रम देउवालाई रिसै उठेको भए फोटो नै हटाउन लगाउँथे होला नि। किन हटाउन लगाएनन्? हटाउनै सजिलो होइन र। कालो पोत्न लगाउँथे होला नि, किन पोत्न लगाएनन्?
अथवा पूरै फोटो नै छोप्न लाउँथे होला नि, किन लगाएनन्? किन आँखा मात्र छोप्‍न परेको ? आँखामात्र छोपेर चाहिँ के हुन्छ? भित्ताको फोटोले आफूलाई केरकार गरिरहेको जस्तो लाग्छ भनेर हो कि 🙂
फेरि देउवालाई त्यस्तै रिस उठेको र इबी साँध्न परेको भए मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने कोठाको भित्तामा रहेको राष्ट्रपतिको फोटो मात्र किन? आफ्नो कार्यकक्षको फोटो पनि त्यस्तै गर्न लाउँथे होला नि। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा प्रसारण भएको त्यहाँको दृश्यमा त राष्ट्रपतिको फोटोमा आँखा छोपिएको छैन त-
अरु एङ्गलको फोटो नै छैन
मन्त्रिपरिषद् बैठकको फोटो अरु एङ्गलबाट खिचेको भए वा कसैले भिडियो खिचेको भए त्यसमा पक्कै फोटोको फ्रेमको शिशामा लाइट रिफ्लेक्ट नभएको भेटिन्छ कि भनेर खोजेको, अरु एङ्गलको कुनै फोटो नै भेटिएन। निजी मिडियाका फोटोग्राफरहरुलाई भित्र जान नदिएको रहेछ।
टिभीमा चाहिँ रहेछ कि खोज्नुपर्‍यो भन्ने लाग्यो। नेटटिभीमा टेलिभिजन कार्यक्रम रेकर्ड रहन्छ। भएभरका सब निजी टिभीको रेकर्डबाट समाचारहरु हेरेँ- अहँ कुनैमा रहेनछ त्यहाँको भिडियो। टेलिभिजनहरु त साह्रै अल्छी भएछन् अचेल। धेरैले भिडियो होइन, राससकै यही फोटो प्रयोग गरेका रहेछन्।
नेपाल टेलिभिजनमा चाहिँ पदबहाली र पहिलो निर्णयमा प्रम देउवाले साइन गरेको भिडियोमात्र रहेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको भिडियो त त्यसमा पनि रहेनछ। त्यसैले सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध कुनै अरु फोटोको प्रमाण नदेखिएका कारण यो विषयमा फ्याक्टचेकै चाहिँ गर्न सकिएन। फ्याक्टचेक भनेको ब्लगमा जस्तो आफूलाई मनमा लागेको कुरा लेखेर हुने कुरा भएन।
भएको के होला ?
मेरो विचारमा त यो भित्तामा रहेको राष्ट्रपतिको फोटोको फ्रेमको शिशामा लाइट रिफ्लेक्ट भएको हो। सँगैको भित्तामा पनि देखिन्छ त्यस्तै।
फोटो खिचिरहने मान्छेलाई थाहा हुनुपर्ने हो यस्तो कसरी हुन्छ।
यो सेतोपाटीको अङ्ग्रेजी संस्करणमा छापिएको फोटो हेर्नुस्- ओलीकै पालामा राष्ट्रपतिको फोटोमा ‘सेतो पट्टी’ हाल्न त जरुरी थिएन होला नि !
अनलाइन मिडियाले जुम गरी गरी फोटो राखेका छन्, जुम गरेपछि रवि लामिछाने मुछिएको शालिकराम आत्महत्या केसमा एफबीआई (फेसबुक ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन- फेसबुके अनुसन्धानकर्ता)हरुले शालिकरामको आँखाको नानी जुम गरी गरी हत्यारा नै देखिएको दावी गरेको बिर्सनु भएको छैन होला नि। मंगल ग्रहको फोटोमा मान्छेको जस्तो अनुहार, हर्ट सेप, रोबोटको खुट्टा, माछा – के के सम्म देखिएन, यहाँ क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। आँखालाई धोका दिने फोटोहरु पनि तपाईँहरुले देख्नुभएकै होला।
मैले सोचेकै कुरा तपाईँले पनि मान्नुपर्छ भन्ने छैन। हल्लामा जे आयो त्यो नपत्याई यसो कल्पना गर्नुस्, लजिक निकाल्नुस्- मान्छे भएपछि यति दिमाग त लगाउन परो नि। कि कसो?
हिजो निजी मिडियाका अरु फोटोग्राफरहरुलाई पनि छिर्न दिएको भए अरु एङ्गलका फोटोहरु पनि आउँथे होलान् र एउटै फोटो हेरेर अनेक व्याख्या हुन्थेन होला। यो काण्डपछि बुद्धि फिरेछ कि के हो, राष्ट्रपतिको फोटो लाइट रिफ्लेक्ट नहुने गरी मुन्तिर राख्न थालिएछ त 🙂
1 thought on “राष्ट्रपतिको भित्ते फोटोमा गरियो के? ‘ब्लर’ गरेकोदेखि ‘सेतो पट्टीले छोपेको’सम्मका समाचार”
Vir Gorkhali says:
This whole issue is fake! The real cause is the reflection of the ceiling light on the photo frame of the President which is evident from the reflection of other ceiling light on the right on the wall behind PM at the same height of the other frame on the left. The reflections of other lights are combined on the left of PM (i.e. on the right of the image) middle wall. So, it proves that there was no any misdemenour from the PMO office on the frame of the President.